Xaasaska Askartii u geeriyootay difaaca dalka oo sheegay in mushaarkii laga jartay +(SAWIR) – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Qaar ka mid ah Xaasaska Askartii u geeriyootay difaaca dalka Sanadyadii lasoo dhaafay ayaa Sabtidii maanta banaanbax ka dhigay Iridda Xarunta Madaxtooyadda Qaranka.
Xaasaskan Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in 15-kii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaar ah.
Waxay kaloo ay xuseen in dhammaan laga soo xirtay Xafiisyada dowlada, islamarkaana Madaxda dowlada dhexe ee Soomaaliya ay Al-baabada kasoo xirteen.
Sidoo kale, xaasaska Askarta u geeriyootay difaaca dalka ayaa waxa ay sheegeen in guryihii ay deganaayeen laga saaray, sidoo kalena hadda aysan heysan wax ay raashin ku iibsadaan.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayay ugu baaqeen in ay ka jawaabaan Cabashooda.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa inta badan sheega in ay bixiyaan xuquuqda Askarta u dhimata difaaca Qaranka.
Tags: Xaasaska Askartii u geeriyootay difaaca dalka oo sheegay in mushaarkii laga jartay